White Gold Set4- Forever Gems
1 x WGBG1 ရွေဖြူပုံဆန်းလက်ကောက်
Ks. 1,183,700 Ks. 1,246,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
1 x Ring WGRN1
Ks. 272,650 Ks. 287,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
1 x WGCN1 White Gold...
1 x WGER1 White Gold...
Ks. 322,050 Ks. 339,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။